» मुटुदेखि मुटुसम्म एपिसोड–२ माया कि ओभर केयर ?
चन्द्र घलान/हेटौँडा, १६ फागुन । जब हामी कसैलाई आफुलाई भन्दा बढी माया गर्छौँ, तब उसका लागि हामी सबै कुरा त्याग गर्न पनि तयार हुन्छौँ । आफुले माया गर्ने मान्छेका लागि परिवार, आफन्त अनि परिआए संसार नै छोड्न पनि सक्छौँ जस्तो हामीलाई आभाष हुन्छ । संसारका सबै थोक फिका लाग्छन् मायामा । अनि बस् आफुलाई माया गर्ने मान्छे र माया नै हाम्रो लागि जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य हो जस्तो हामीलाई लाग्छ । त्यसैले कहिलेकाँही मान्छेले मायामा धोका पाएपछि संसारबाटै बिदा हुने निर्णय गर्छ । उसले आफ्नो पिडामा आमाबुवाको पिडालाई चटक्कै बिर्सन्छ । आफ्नो जीम्मेवारी सबै भुल्छ । श्रृष्टिकर्ताले दिएको अमुल्य जीवनलाई अन्त्य गर्न ऊ कि डोरी लिएर फाँसीमा चढ्छ कि विष सेवन गरेर छट्पटाउँछ । किन कि उसले आफ्नो अगाडि बढ्ने सबै बाटोको अन्त्य भएको देख्छ । तर वास्तविकता त्यो होईन । किन कि जहाँ एउटा बाटोको अन्त्य हुन्छ त्यहाँबाट फेरि अर्को बाटोको सुरुवात हुन्छ ।
त्यसैले हामीले एकअर्कालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । हुन त आजको समयमा विवाह अघिको प्रेमलाई मर्यादित बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान कमै जान्छ तर एउटा नैतिक बन्धनमा बाँधिएर विवाहपछिको श्रीमान श्रीमतीको प्रेमलाई महत्व दिन सके यस्ता कुराहरुको जोखिमबाट हामी सुरिक्षत हुन सक्छौँ । तर यदि तपाई कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाई माया गर्दैहुनुहुन्छ वा ओभर केयरिङ ? त्यसको बारेमा सचेत हुनु जरुरी छ । मायाको एउटा सिमा कोरेर त्यही अनुसार जीवनमा अघि बढ्न सके हामीले प्रेमलाई त्याग गर्नुपर्ने दिन नआउन सक्छ । आसा गरौँ हरेक प्रेमिल जोडीको प्रेम सफल होस्, एकअर्काको जीवनसाथी बनेर एकअर्कालाई बुझेर अघि बढ्न सकियोस् । एकलाई चोट पर्दा त्यसमो पिडा उसको आफ्नो मान्छेले पनि आभाष गर्न सकोस् । प्रेम आफैमा एउटा यस्तो माध्यम बनोस् जसले हरेक चुँडिएका मनहरुलाई जोड्न सकोस्, हरेक रोएका मुहारलाई मुस्कुराउन सफल हुन सकोस् अनि एउटा मनको आभाषलाई अर्को मनको तारसम्म जोड्न सकोस्, जसले पुराउन सकोस् हरेक मनका आभाषहरु उसको हकदारको मुटुसम्म । मुटुदेखि मुटुसम्म । हेरौँ भिडियो–
सारेमगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालका उत्कृष्ट १३ प्रतियोगीहरु
दमदार आवाज भएका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु
भोईस किड्स नेपालमा ब्लाईण्ड अडिसनबाट छानिएका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु
भोईस किड्स नेपालमा ब्लाईण्ड अडिसनबाट छानिएका उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु